क्युआर ६४४ : कहाँ छन् ४ भुटानी, एक पाकिस्तानीसहित १५० यात्रु ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार क्युआर ६४४ : कहाँ छन् ४ भुटानी, एक पाकिस्तानीसहित १५० यात्रु ?
क्युआर ६४४ : कहाँ छन् ४ भुटानी, एक पाकिस्तानीसहित १५० यात्रु ?
२०७७, ३ बैशाख बुधबार ०९:३३
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएका एकै परिवारका सदस्यहरू फागुन ५ गते बेलायत गएका थिए । एक महिनाको बेलायत बसाइपछि उनीहरू चैत्र ५ (मार्च–१८) गते बिहान कतार एयरको क्युआर ६४४ नम्बरको उडानबाट काठमाडौं आएका हुन् ।
यो जहाजबाट नेपाल फर्किएका दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अन्य यात्रुहरूको खोजी सुरु भएको छ । बेलायतबाट फर्किएका मध्ये २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
अन्य एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरू एकै परिवारका सदस्य हुन् । र्‍यापिड टेस्ट किटबाट गरिएको परीक्षणमा सोमबार तीन जनामा नै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो । त्यसलगत्तै तीनैजनालाई थप परीक्षणका लागि पाटन अस्पताल लगिएको थियो ।
पाटन अस्पतालमा उनीहरूको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा ८१ वर्षीया बृद्धा र ५८ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ ।
उनीहरू कतार एयरमा इकोनोमी क्लासको २६ डी, २६ इ र २६ एफ नम्बरको सीटमा बसेका थिए । उडानमा सम्मिलित सदस्यबाहेक उक्त जहाजमा १ सय ५३ जना यात्रु थिए । जसमा ४ जना भुटानका र १ जना पकिस्तानी नागरिक थिए । बाँकी १ सय ४८ जना नेपाली नागरिक सवार थिए । कतार एयरमा सवार भुटान र पाकिस्तानका नागरिकहरू खोज्न हम्मे पर्ने देखिएको छ । अन्य १ सय ४८ जना नेपालीहरू समेत तितरवितर भइसकेका छन् ।
सो जहाजका यात्रु सबै ५ गते बिहान साढे १ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए । ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एक बृद्धा र अर्का एक पुरुषलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टी गरिसकेको छ ।
उनीहरू आमा–छोरा भएको बताइएको छ । अर्की एक महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भएको छैन । कतार एयरको क्युआर ६४४ बाट काठमाडांै आएका दुईजनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उक्त जहाजमा सवार अन्य यात्रुको अवस्था के छ भन्ने चिन्ता छाएको छ ।
पर्यटक भिसामा उनीहरू बेलायत गएका थिए । काठमाडौं आउने क्रममा नै उनीहरू सामान्य ज्वरो र खोकीबाट संक्रमित भएको स्रोतले बताएको छ । बेलायतबाट फर्किएपछि पेप्सीकोलास्थित सनसीटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका उनीहरूको सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण गरिएको थियो ।
उक्त विमानमा सवार अन्य यात्रुसमेत शंकाको घेरामा तानिएका छन् । ‘सो विमानमा सवार अन्य सबै यात्रुको पहिचान गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ’, एक चिकित्सकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सो जहाजबाट फर्किएकाहरूलाई नखोज्ने हो भने भयावह अवस्था आउनसक्छ । ती सबैलाई क्वारेन्टाइमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
यात्रुको नाम र ठेगानाका आधारमा स्थानीय तहमा तत्काल उनीहरूको विवरण जानकारी गराउनु पर्ने देखिएको छ । क्युआर ६ सय ४४ नम्बरको उडानबाट फर्किकाहरू आफन्त र साथीभाइसँग घुलमिल भइसकेका छन् ।सनसीटी अपार्टमेन्टका बासिन्दाहरूको मात्र नभइ उक्त जहाजबाट नेपाल आउने र उनीहरूको अन्य कनेक्सनमा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्नु पर्ने देखिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
Previous articleर्‍यापिड टेस्टमा थप पाँचजनामा देखियो कोरोना ‘पोजेटिभ’
Next articleकोरोना बिरुद्धको युद्धमा होमिएका म्याग्दीका सागर राजभण्डारी